Nabata na webụsaịtị anyị.
Ihe nkedo wired
UTV ATV Cable njikota
Ngwa nkwukọrịta Waya H
Ụgbọ ala eletriki ụgbọ ala
Mgbakọ USB HSD
Industrial Equipment Waya njikota
Mgbakọ Cable Medical
Ike Equipment Waya njikota
Mgbakọ USB Sensọ
Ngwa ngwa nke modul ngwa anya
Ka ọ dị ugbu a, a na-ejikarị modulu anya arụ ọrụ na netwọkụ etiti data ịntanetị, netwọ nnyefe metro, netwọkụ nkwukọrịta nke netwọkụ na-ebu 5G nọchiri anya ya, yana vidiyo nkọwa dị elu. Enwere modulu ngwa anya abụọ. Otu bụ modul fiber optic GBIC, yana ot ...
Igwe DAC na eriri AOC
A na-arụ ọrụ DAC Cables na AOC Cables na sistemụ ịgbakọ netwọkụ na-arụ ọrụ dị elu na ndụ kwa ụbọchị n'ihi adịghị ike ha, ike dị ala na ọnụ ala. Cable Direct Attach (DAC) nwere eriri ọla kọpa abụọ. A na -ekewa eriri DAC n'ụdị abụọ: acti ...
Ngwa nke modul ngwa anya
site na nchịkwa na 21-08-04
A na -ejikarị mgbada nke ngwa anya na ọnọdụ atọ: netwọkụ na -ebu nkwukọrịta, netwọkụ nnweta, ebe data na Ethernet. Netwọk ndị na -ebu telecom na netwọkụ nnweta bụ nke ahịa ndị ọrụ telecom. N'ime ha, a na -ejikarị modul ngwa anya WDM maka ọkara ...
Ọrụ nke modul ngwa anya
site na nchịkwa na 21-08-02
Ntughari fotoelectric bụ ọrụ bụ isi nke modul ngwa anya. Njedebe mgbasa ozi na -atụgharị mgbama eletrik ka ọ bụrụ mgbama anya, a na -ebufekwa akara modul ngwa anya site na eriri anya. Mgbe ahụ, njedebe nnata na -atụgharị mgbama anya ka ọ bụrụ ọkụ eletrik ...
Gịnị bụ modul ngwa anya BIDI?
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ngwa anya dị n'ahịa na -ebunye data site na eriri anya abụọ. A na -eji otu eriri nweta data sitere na ngwaọrụ netwọkụ, a na -ejikwa eriri dị iche iche ebunye data na ngwaọrụ netwọkụ. Agbanyeghị, enwere ụdị modulu ngwa anya nke nwere ike ịghọta data ...
Okwu mmalite nke ngwa anya
site na nchịkwa na 21-07-28
Kedu ihe dị na modulu ngwa anya? Ngwaọrụ optoelectronic, sekit na -arụ ọrụ na oghere ngwa anya. Ngwa optoelectronic gụnyere nnyefe na ịnata akụkụ. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọrụ nke modulu ngwa anya bụ ịgbanye mgbama eletrik ka ọ bụrụ mgbama anya ...
Nwepu azụ teknụzụ nke ụgbọ ala njikota njikọ ọnụ
site na nchịkwa na 21-05-22
1 Okwu Mmalite Ngwa njikọ ụgbọ ala nwere ọdụ, ọbọ, wires, njikọ, teepu, paịpụ corrugated, ọkpọkọ PVC, akpa ọkụ ọkụ, fuse, igbe fuse na ngwa ndị ọzọ. Ọ na -arụ ọrụ dị ka netwọkụ akwara maka ụgbọ ala, na -ebunye akara, na -arụkwa ọkụ eletrik. D ...
Nyocha na Ngwa nke Ọdịdị Njikọ Njikọ Ọdịdị Ike Ọhụrụ
site na nchịkwa na 21-05-21
Ihe jikọrọ njikọ ọkụ eletrik dị elu bụ: ụlọ (njedebe nwoke, njedebe nwanyị), ọnụ (ọdụ nwoke na nwanyị), mkpuchi mkpuchi, akara (ọdụ, njedebe ọkara, njedebe waya, kọntaktị), mkpuchi ọdụ ọdụ, usoro njikọta ọkụ eletrik dị elu. , Sistemụ CPA, yana akụkụ ihe owuwu ndị ọzọ. ...
Nsogbu na usoro mmepe nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala ụgbọ ala
site na nchịkwa na 21-05-19
Ka ọ na -erule 2020, ahịa ụgbọ ala ọdịnala nke obodo m ga -abụ ihe dị ka ijeri yuan 12.3, na ahịa ụgbọ ala ike ọhụrụ ga -abụ ihe dị ka ijeri 1.35 ijeri. Site na mmụba na -aga n'ihu n'ọkwa ahịa nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala nke obodo m na mmụba na -abawanye na proport ...
Ngwọta nrụpụta n'oge COVID-19
site na nchịkwa na 21-05-18
Dika oria ojoo COVID-19 megharịrị akụkụ niile nke ndụ anyị, ọ dị mkpa iwepụta oge tụgharịa uche n'ọnọdụ anyị nọ n'oge nsogbu a. Anyị na Olink Manufacturing Solutions chọrọ ịsọpụrụ ndị na -alụ ọgụ n'ihu ọrịa a, gụnyere ndị dọkịta, ndị nọọsụ ...
Kedu ihe njiri mara njikwa nke usoro nrụpụta wiwi ụgbọ ala
Dị ka otu akụkụ dị mkpa nke ụgbọ ala ahụ, ihe mkpuchi wiwi ụgbọ ala na -arụ ọrụ nke ijikọ ngwa eletriki ụgbọ ala niile. Mgbe nsogbu dị mma na -eme na ngwa wiwi, ọ na -adị mfe ịkpata ịtụba, nchekwa, na mgbochi ọdachi. Dị ka onye na -eweta ...
Ọmụmụ ihe omumu nke eriri wiring dị elu maka ụgbọ ala eletrik
site na nchịkwa na 21-05-15
1. Okwu Mmalite Dị ka isi akụkụ nke sistemụ ụgbọ ala eletriki, eriri wiwi ụgbọ ala bụ onye na -ebu nnyefe ike ụgbọ ala eletrik na nnyefe akara, nke dị oke mkpa maka ịnya ụgbọ ala eletrik. N'etiti akụrụngwa akụrụngwa wiring, ụgbọ ala elu-voltag ...
Webata ngwa nke eriri hydraulic n'ụzọ zuru ezu
site na nchịkwa na 21-05-14
A na -ekewa nhazi ọkwa hoses na eriri eriri, eriri mmiri mmiri, akpa ikuku, ọkpọ ịsa ahụ, na ọkpọ wiring. A na -ekewa ihe ahụ n'ime eriri igwe anaghị agba nchara, eriri igwe, sooro nchara, eriri roba, na eriri rọba. Ngwakọta hydraulic mejupụtara mmiri-resista ...
Mmiri Leakage nke T&C ọdịda Mode nke waya njikota System Series
Edemede a bụ nke ikpeazụ na "T & C Failure Series." Maka ịwụfu mmiri, nsonaazụ a tụrụ anya na -enwekarị isi ihe ndị a: #Terminal nchara #Mbelata mbuli elu #Circuit anaghị ejikọ nyocha nke ihe nwere ike ịda:
Ọdịda izugbe T&C na ihe nwere ike ibute nyocha nke usoro sistemụ wiring (3)
site na nchịkwa na 21-05-12
Taa, anyị ga -ekwu maka ụdị nhịahụ siri ike nke njikọ njikọ. Atọ, nsachapụ Ọtụtụ mgbe, ozugbo ọ ghọrọ ụdị a, ndụ njikọ ahụ ga -akwụsị. Ọzọkwa, ana m echetara onye ọ bụla na a ga -ahụ na ọdịda ọdịda nke njikọ ahụ ga -agbanwe. Dabere na ihe kpatara ya, nguzogide buru ibu. N'ime ...
Ọnọdụ ọdịda ngwa T&C yana ihe nwere ike ime nyocha nke usoro sistemụ wiring (2)
site na nchịkwa na 21-05-11
2. Ịbawanyewanye na -eguzogide -Ụdị ọdịda na -adịkarị: 1. Mbelata voltaji; 2. Mfu akara; 3. A na -agbaji loop. N'ikwu okwu a, ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ikwu na ọ bụrụ na i kwuo ntakịrị, ọ ga -ebute nsachapụ ahụ. Ee, isiokwu iwepụ afọ ime, Achọrọ m ịchekwa ya ma emechaa, n'ezie, ọ bụrụ na ...
Ọnọdụ ọdịda ngwa T&C yana ihe nwere ike ime nyocha nke usoro sistemụ wiring (1)
site na nchịkwa na 21-05-10
Ụfọdụ ndị enyi rịọrọ onye ode akwụkwọ ka ọ kerịta nyocha nke ọdịda na ọdịda n'ihi na ndị injin anyị na -ahụ maka wiwi na -etinye nnukwu ume ha n'ịrụzi ụgbọ ala n'ọrụ ha kwa ụbọchị. Na -esote, onye edemede ga -eji ibe ole na ole chịkọta nsogbu nkịtị na ihe nwere ike ibute T & ...
Waya na eriri waya
site na nchịkwa na 21-05-07
N'ikwu maka wires ndị dị na ngwa wiring, anyị ga -ebu ụzọ kewaa ha. Ma ọ bụghị ya, ọ dị njọ ịhazi ihe niile. Site na nlele ọrụ: 1. Ụdọ ike; 2. waya ala; 3. Akara akara; Enwere ike kewaa ya n'ụzọ atọ. Biko mara na wires ndị a kpọtụrụ aha na th ...
Gịnị bụ ezigbo njikota njikota
Ọ dị ka otu puku mmadụ nwere puku Hamlet. Eleghi anya fuuz bụ nhọrọ ziri ezi, Ma ọ bụ mkpuchi ahọrọ? Waya ọ dabara na fuuza ọ dị mma? A họpụtara ọsọ agba anọ ahụ? A họpụtara mkpuchi ahụ? Wiring 3D ọ nwere ezi uche na -enweghị ndabichi? Na ndị ọzọ… Ihe m kwuru n'elu bụ ihe niile ...
Na -eche echiche maka usoro mmepe nke ijikọ wiwi ụgbọ ala
Mgbanwe nke mmelite ọhụrụ anọ ewepụtala ihe ndị ọzọ siri ike maka imepụta teknụzụ ijikọ ụgbọ ala. Nnukwu voltaji na fechaa bụ usoro mmepe na -enweghị mgbagha nke ụlọ ọrụ na -ejikọ eriri igwe. Ngwa eletriki eletriki dị elu, mana t ...
Onye na -ahụ maka ahụ (BCM) nhọrọ okirikiri okirikiri okirikiri.
Ụkpụrụ nke ijikọ wiwi bụ imepụta nkesa ike dị elu na nkwenye eletriki elu. Usoro nyocha ahụ dabere na ịhọrọ fuuz mbụ wee họrọ waya. A bịa nhọpụta nke dayameta waya, ọ nweghị ụzọ isi zere ọchịchọ ochie ...
Nghọtahie nke nkesa ike nke BCM
BCM, ọtụtụ ndị nrụpụta nwere aha dị iche iche, enwere ike kewaa ya n'ọtụtụ modulu, mana agbanyeghị, maka ịdị mma maka mkparịta ụka, anyị ka na -akpọ BCM otu. N'ime afọ iri abụọ gara aga, mmepe nke teknụzụ BCM emeela nnukwu ọganihu. Agbanyeghị, enwere nsogbu na -emebeghị ...
Kedu ihe ekwesịrị ị attentiona ntị na mgbe a na -ahazi nhazi eriri waya na mgbakọta eriri eriri?
site na nchịkwa na 21-04-25
Dịka onye nrụpụta ọkachamara na -arụzi ihe nkedo waya, anyị achịkọtara isi ihe ụfọdụ maka nlebara anya na eriri waya na nhazi mgbakọ USB maka ntụaka gị na -akwado afọ nke ahụmịhe ụlọ ọrụ. Ọ baghị uru na anyị na -eme otu waya dị mfe ma ọ bụ nhazi eriri ma ọ bụ eriri siri ike ...
Kedu ihe omumu ihe njiri waya nwere ike ịmụta na ịmụta site n'ozuzu nke ogbako ọgbakọ ụgbọ ala?
Anyị anaghị ekwu maka mgbakọ USB, mana mgbakọ ụgbọ ala. Nke ahụ bụ ihe ọchị, anyị na -eme mgbakọ USB na eriri wiwi maka ụgbọ ala. Mana echere m na anyị nwere ike ịmụta ihe site na mgbakọ ụgbọ ala maka mgbakọ eriri anyị na usoro ijikọ eriri. Ka anyị lelee ma hụ. Nhazi nke ụgbọala ikpeazụ asse ...
Njikwa mma na usoro mmepụta nke eriri wiring ụgbọ ala
site na nchịkwa na 21-04-22
Isiokwu a na-agwakọta usoro nrụpụta n'ezie nke eriri wiring ụgbọ ala dabere na ọrụ dị oke mkpa nke tangent-spray-crimping, ịgbado ọkụ ultrasonic, tubing na-ekpo ọkụ, waya tọrọ atọ, mkpuchi mgbakọ na ngwa, nnwale arụmọrụ eletriki, ịrịọ arịrịọ ...
Kedu ihe ndị kachasị mkpa ị ga -echebara echiche mgbe ị na -ahọrọ atụdo, kọntaktị na ihe mgbochi maka eriri waya omenala ma ọ bụ mgbakọ eriri?
site na nchịkwa na 21-04-20
Mkpọka, kọntaktị na ngọngọ nwere ike ịbụ ngwaahịa ngwa mma dabara adaba iji ghọta njikọ eletrik, kewara ya na ngalaba njikọ n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ akụkụ nke plastik na-emechi emechi. Enwere oghere na nsọtụ abụọ iji tinye wires. E nwere a ...
Ihe mgbochi waya static
site na nchịkwa na 21-01-08
Mgbe m yipụrụ sweta m n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri, ụda mkpọtụ ahụ nọgidere na -ada. Nke a bụ ihe a na -ahụkarị na ndụ. N'ime usoro nrụpụta nke ụfọdụ ihe mkpuchi eriri pụrụ iche, ọkụ eletrik static na -emerụ ngwa eletrọnịkị nke ukwuu. Ihe egwu dị na ọkụ eletrik static na igwe eletrọnịk ...
Ihe nkedo nke akpaaka akpaaka: belata ọnụ ahịa na ibu site na ime ka nhazi sekit dị mfe
site na nchịkwa na 20-12-29
Site na ime ka usoro sekit dị mfe, ndị na -emepụta ụgbọ ala na -amụ ihe ọkụ eletrik na eletrọniki ọhụrụ, si otú a na -ebelata oke ọnụ ahịa na ibu. Nhazi a nwere ike belata wiring achọrọ iji kwado ọrụ ụgbọ ala dị iche iche, ma nwee ohere ibelata ibu, mee ka nrụpụta akpaaka rụọ ọrụ ...
Njirimara ngwa nke njikọ ụgbọ ala
site na nchịkwa na 20-12-18
N'ihe gbasara ebumnuche nke njikọta ụgbọ ala, iji hụ na arụ ọrụ ụgbọ ala ahụ dị mma, anyị nwere ike kewaa ntụkwasị obi nke njikọ ahụ n'ime arụmọrụ akara nke njikọ ahụ na-eji, arụmọrụ na-egosi ọkụ. ụgbọ ala na -anya ụgbọ ala, yana arụmọrụ o ...
Kedu ihe eriri patch dị na ihe mmetụta ọ bụla nke ụgbọ ala ahụ na -anọchi anya ya?
site na nchịkwa na 20-12-15
N'ime ọha mmadụ nke oge a, itinye ihe mmetụta n'ime ndụ ndị mmadụ. Ihe mmetụta bụ ngwaọrụ a na -ejikarị eme ihe, nke na -arụkarị ọrụ ntụgharị ntụgharị ụdị ozi, ọtụtụ n'ime ha na -agbanwe ụdị mgbaàmà ndị ọzọ ka ọ bụrụ akara eletriki maka ịchọpụta na nleba anya ka mma ...
Atụmatụ atụmatụ nke ijikọ wiwi ụgbọ ala jikọtara ọnụ
site na nchịkwa na 20-12-14
Enwere ọtụtụ ngwa eletriki etinyere n'ụgbọ ala, nke na -eme ka njikọ njikọ na wires dị n'ụgbọ ala ahụ na -abawanye. N'ime imebe eriri waya, otu esi ahụ na eriri eletriki a pụrụ ịdabere na ya bụ okwu dị mkpa. N'ime usoro nhazi, isi ala na groun ...
Kedu ihe ndị achọrọ maka njikọta ụgbọ ala?
site na nchịkwa na 20-12-11
Mgbe ụgbọala na -agba ọsọ, a ga -arụrịrịrịrị akụkụ niile yana jikọtara ya ọnụ n'etiti akụkụ nke ọ bụla. Na nkwado nke akụkụ nke ụgbọ ahụ, njikọ ahụ na -arụ ọrụ dị oke mkpa. Ma ọ bụ ụgbọ ala ọdịnala ma ọ bụ ụgbọ ala ike ọhụrụ, njikọta bụ isi ihe mgbe niile ...
Kedu ihe bụ usoro maka ijikọ wiwi ụgbọ ala
Otu: teknụzụ na -emepe emepe. Izi ezi nke usoro mmeghe waya nwere njikọ chiri anya na usoro mmepụta niile. Karịsịa n'oge usoro mmeghe waya, ozugbo njehie mere, ọkachasị ma ọ bụrụ nha waya dị mkpụmkpụ, ọ ga-eme ka ọdụ niile rụgharịa ọrụ, nke na-ewe oge na mbọ t ...
Ihe Mere Ihe Mere Ọdịdị Wires na Cables ji dị mma
site na nchịkwa na 20-12-09
Site na nnukwu asọmpi anyị na -ahụ n'ahịa taa, ndị nrụpụta na -achọ ime ngwaahịa dị ọnụ ala maka ndị ahịa ha, ọbụlagodi na nke ahụ pụtara imebi ịdị mma ya. Ọ dị mma, anyị anaghị ekwu na onye nrụpụta ọ bụla bụ otu, mana ọ bụrụ n'ilelee nnukwu foto, ị ga -ahụ ọtụtụ c ...
Ụdị, ụdị ọdịda, na ụzọ nyocha nke ngwa wiring ụgbọ ala
Ihe nkedo wired ụgbọ bụ akụkụ netwọkụ nke sekit ụgbọ ala, ọ nweghịkwa sekit ụgbọ ala na -enweghị ngwa wiring. N'ime ngwa wiwi ụgbọ ala, waya bụ akụkụ dị mkpa na ya. Isiokwu ahụ na -ekwukarị ụdị, ụdị ọdịda na ụzọ nchọpụta nke wirin ụgbọ ala ...
Ị na -amaja ịnya ụgbọ ala na -enweghị ọkwọ ụgbọ ala?
site na nchịkwa na 20-12-08
Ọrụ nnwale nke ụgbọ ala mbụ na -enweghị ọkwọ ụgbọ ala na Shenzhen emeela ka obi sie ike na ike teknụzụ obodo m. N'ime oge a, United States na Singapore malitekwara ime nnwale ndị ọkwọ ụgbọ ala. Ihe dị ịtụnanya bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ ala niile na -enweghị ọkwọ ụgbọala na -amalite site na bọs. Nke ...
Mgbanwe ndị dị a “aa ka “ihe mkpuchi ụgbọ ala” ga -eji ịnya ụgbọ ala kwụ ọtọ?
site na nchịkwa na 20-12-07
Maka ndị injinia na ndị na -emepụta ngwaahịa, na -eche ihe mgbagwoju anya nke ụgbọ ala kwụụrụ onwe ha ugbu a esirila ike, mana ịdị mgbagwoju anya nke ọdịnihu ga -abawanye naanị ma ghara ibelata. Gịnị ka ha ga -eme? A na-agwakọta ụgbọ ala nke oge a site na netwọ njikwa ihe njikwa bandwidth dị elu, a ...
Uru nke iji njikọta
Meziwanye usoro mmepụta Ihe njikọ ahụ na -eme ka usoro mgbakọ elektrọnik dị mfe. Ọ nwekwara ike ime ka usoro imepụta oke dị mfe; Ndozi dị mfe Ọ bụrụ na akụrụngwa elektrọnik ada ada, enwere ike dochie akụkụ adịghị mma ngwa ngwa mgbe ahazi njikọ ya; Ọ dị mfe ịkwalite mgbe teknụzụ ...
Otu esi enyocha ogo ụlọ ọrụ na -edozi waya
site na nchịkwa na 20-12-03
N'agbanyeghị ụdị ngwaahịa a na -emepụta, enwere nsogbu na njikwa njikwa ngwaahịa, ya bụ, otu ahụ ka ọ dịkwa maka ụlọ ọrụ na -ahụ maka ijikọ waya, yabụ kedu ka ụlọ ọrụ nhazi eriri waya ga -esi ejikwa ịdị mma ngwaahịa? 1. Nke mbụ, ọzụzụ ọrụ dị mkpa kwesịrị ịbụ ụgbọ ala ...
Mmetụta mmetụta nke nguzogide kọntaktị nke njikọ ụgbọ ala
site na nchịkwa na 20-12-02
Dị iche iche ọnụ ihe nwere dị iche iche ekweghị ekwe na conductivity. Site na nyocha nke ụkpụrụ nke nguzogide kọntaktị, enwere ike ịhụ na mpaghara kọntaktị nke kọntaktị kọntaktị ọ bụla nke ọnụ na ike siri ike dị iche, nke na -ebute ọdịiche dị n'etiti t ...
Nnyocha na teknụzụ mmepụta nke njikọ ụgbọ ala
site na nchịkwa na 20-12-01
Asọmpi nke akụkụ ụgbọ ala nwere ike ịdabere na ihe ọhụrụ na -aga n'ihu na teknụzụ mmepụta yana mmụba na -aga n'ihu na teknụzụ mmepụta, iji bulie ike mmepụta nke ngwa ahịa yana hụ na ịdị mma ngwaahịa. 1. Teknụzụ mmepụta nkenke: Teknụzụ a bụ ...
Kedu otu esi arụzi eriri wiwi ụgbọ ala?
site na nchịkwa na 20-11-30
Nlekọta nke eriri wiwi kwesịrị ịbụ ọrụ bụ isi na mmezi okirikiri ụgbọ ala. Ogo nke ọrụ a bụ isi metụtara ịdị mma nke idozi ahịrị. Cheedị na ọ bụrụ na amachaghị nka nke ijikwa njiri wiring, usoro sekit ...
The kpọmkwem usoro nke akpakanamde wiring njikota imewe na n'ichepụta
site na nchịkwa na 20-11-28
Usoro a kapịrị ọnụ nke imepụta na ijikọ wiwi ụgbọ: 1. Nke mbụ, injinia okirikiri ọkụ eletrik na -enye ọrụ nke sistemụ eletriki niile, gụnyere ibu eletriki niile yana ihe ndị pụrụ iche chọrọ. Ọnọdụ akụrụngwa eletriki, ebe nrụnye ...
Igwe eletriki nwere uru ojiji bara uru
site na nchịkwa na 20-11-27
Circuit elektrọnik bụ akụkụ dị oke mkpa na ndụ anyị, sekit elektrọnik na -arụkwa ọtụtụ ọrụ dị mkpa na ngwaahịa dị iche iche anyị na -eji kwa ụbọchị. Agbanyeghị, dị ka ngwa na -akwado maka iji ọkụ eletrik dị mma, ọtụtụ ahịrị bụ ihe nzuzo, mana nke a anaghị ezochi njirimara ...
Akụkụ anọ bụ isi nke njikọ ụgbọ ala
site na nchịkwa na 20-11-26
Oghere ụgbọ ala bụ ihe injinịa elektrọnik na ndị ọrụ nka na -emetụ aka. Ọrụ ya dị nfe: wuo àkwà mmiri nkwukọrịta n'ime sekit ma ọ bụ n'etiti sekit na -enweghị ike, ka nke ugbu a wee nwee ike ịgba na sekit nwere ike nweta akara aka ...
Usoro maka ịwụnye sistemụ mgbochi ohi ụgbọala
site na nchịkwa na 20-11-19
Sistemụ ụgbọala na-ezu ohi na-abụkarị ndị ọbịa, ihe mmetụta, ihe ngosi, eriri wiring, njikwa ime obodo, wdg. N'ezie, leba anya na nrụnye iji hụ na ọ dabara na ụgbọ arụnyere. Lee otu esi etinye ngwaọrụ mgbochi ụgbọala. : 1.Open oghe panel tumadi na bot ...
Kedu ihe uto nke ụlọ ọrụ ume na nkwukọrịta na -egosi?
site na nchịkwa na 20-11-11
Ozi sitere na ike ụgbọ ala na ụlọ ọrụ nkwukọrịta na -egosi na agụụ maka eriri na ngwa ngwa dị iche iche na -abawanye ngwa ngwa. Dịka ọmụmaatụ, eriri coaxial dị mkpa maka ịgbasa akara ekwentị na telivishọn ma ọ bụ jikọọ na akụrụngwa ahụike, ọ dịkwa ha mkpa ịbụ ndị…
Wiring na iche nke ahịrị ike
site na nchịkwa na 20-11-10
N'ime ngwa ụlọ, gụnyere eriri ụlọ, anyị na -enwetakarị eriri ọkụ. Ahịrị ike na -abanye n'ụlọ anyị site na ahịrị atọ: ndụ, nnọpụiche na ala. Iji zere ọgba aghara, anyị na -eso koodu agba ejiri kpuchie wires ndị a. Ahịrị uhie bụ ahịrị ndụ na akwa ojii ...
Nchekwa na ihe egwu zoro ezo nke eriri igwe
site na nchịkwa na 20-11-05
Ka anyị tụlee nchekwa nke ihe nkedo wiwi ụgbọ ala. Taa, a na -eji ụgbọ ala eme ihe iji zere nkwekọrịta na nchekwa ọkụ. A na-ejikarị ngwaọrụ braking mgbochi mkpọchi, njikwa traction, eriri oche na akpa ikuku n'ụgbọ ala iji mee ka ụgbọ ala dị nchebe. Mmejọ dị na ngwa wiring ụgbọ ala nwere ike ibute ọkụ na ndị ọzọ ...
Site na ntopute nke ịnya ụgbọ ala, kedu ka ekwesịrị isi wiring ụgbọ ala?
site na nchịkwa na 20-10-29
N'oge a, a na -ejikọ ụgbọ ala okomoko na -aga n'ihu ma na -aga, na -edobe ọtụtụ kilomita. Ọbụna ụgbọ ala kọmpat nwere ike ifufe ihe karịrị otu maịl n'ime ya. Site na ọbịbịa nke ụgbọ ala ejikọtara, sistemụ nchekwa dị elu yana teknụzụ ịnya ụgbọ ala, agụụ maka wiwi ga -abawanye. Noboru Osada, onye isi ụwa ...
Ngwọta a haziri ahazi maka ihe ọ bụla wiring
Site na ụzọ ọdụ ụgbọ ala dị mfe ruo ụgbụ na-eduzi ọtụtụ ihe mgbagwoju anya, Olink nwere ike inye aka n'ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ ma ọ bụ mezie ma mepụta sistemụ dị ugbu a. Anyị ewepụtala ndepụta ngwaọrụ dabere na ọtụtụ iri afọ nke ahụmịhe aka na eriri USB na ijikọ eriri. O nwere ihe karịrị ...
Ihe na ọrụ braid nke eriri na wires
site na nchịkwa na 20-10-23
A na -ejikarị wiwi eriri mejupụtara ihe atọ bụ isi: conductive core, layer insulation and sheath layer. Na ọdịiche dị n'etiti eriri na wires enweghị oke ókè. Mana site na nlele sara mbara, nhazi nke eriri ahụ dị mgbagwoju anya, yana enwere sh ...
Gịnị bụ ojiji nke waya silicone dị elu?
site na nchịkwa na 20-10-14
Silicone elu okpomọkụ waya nwere magburu onwe elu okpomọkụ na ala okpomọkụ na -eguzogide, magburu onwe mkpuchi mkpuchi arụmọrụ, magburu onwe chemical kwụsie ike, elu voltaji eguzogide, merela agadi na -eguzogide, na ogologo ọrụ ndụ. Na nro na mfe iji wụnye. Silicone elu okpomọkụ waya h ...
Kedu ihe dị iche n'etiti mgbakọ eriri na eriri waya
site na nchịkwa na 20-09-26
Igwe ọkụ eletrik bụ akwara na akụkụ zoro ezo nke ọtụtụ ụlọ ọrụ. Wiring ndị a dị mkpa n'ihi na ha na -akwado ụlọ ọrụ ndị a ka ha wee na -aga n'ihu. Ezinaụlọ chọkwara eriri ma ọ bụ eriri iji nweta ọkụ eletrik maka iji ngwa na ngwa elektrọnik ndị ọzọ.
Okwu mmalite nke ihe ọmụma bụ isi nke ijikọ wiwi I.
site na nchịkwa na 20-09-22
Usoro njikota ikuku 1. A na -ejikọ eriri abụọ ma ọ bụ karịa na ngwa iji nyefee ihe dị ugbu a ma ọ bụ akara. Ọ nwere ike mee ka usoro mgbakọ nke ngwaahịa elektrọnik dị mfe, ọ dị mfe ijikwa ma kwalite, ma melite mgbanwe imewe. Ọdịdị dị elu na digitization nke tra tra ...
Nhọrọ nke njikọ njikọ wiring maka ụgbọ ala
site na nchịkwa na 20-09-18
Nhọrọ nke njikọ njikọ wiring maka ụgbọ ala Njikọ ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke eriri wired, ejiri ya jikọọ ma chekwaa ngwa wiring. Iji hụ na nnyefe ọkụ na akara na -ebufekarị, nhọrọ njikọta dị ezigbo mkpa. Akụkọ a na -ewebata precauti ...
Mmeghe ihe ọmụma njikọ na akụkọ mmepe ya
site na nchịkwa na 20-09-16
Njikọ eletriki dị iche iche bụ ihe dị mkpa na ngwaọrụ elektrọnik a na -apụghị ịgụta ọnụ n'ihi na ha nwere ike ghọta ma chebe nnyefe nke akara eletriki. Site na ijikọ ihe ndị dị na kọmpụta isi ruo na njikọ wires n'ime ụgbọ ala anyị na -anya, ha na -arụ ọtụtụ ọrụ, yana ngwa ...
Ihe omuma nke izizi nke imebe igwe ihe eji eme ihe
site na nchịkwa na 20-09-14
Ihe ọmụma bụ isi nke imebe wiresị ụgbọ ala Akụrụngwa wiring ụgbọ ala bụ akụkụ bụ isi nke sekit ụgbọala, ọ nweghịkwa okirikiri ụgbọ ala na -enweghị eriri wiring. Ka ọ dị ugbu a, ma ọ bụ ụgbọ ala okomoko dị elu ma ọ bụ ụgbọ ala nkịtị na-echekwa ego, ụdị eriri wiring ...
mgbakọ ọgbakọ VS waya njikota
site na nchịkwa na 20-09-11
Mgbakọ USB. A na -ejikọkarị okwu "nzukọ ọgbakọ" na "ijikọ waya". N'ezie, a na -ejikwa okwu "cable" na "waya" eme ihe. Mana, nke a bụ naanị maka onye nkịtị. Maka ndị ọkachamara na ndị maara maka teknụzụ nke ihe ndị a, ihe niile ...
Ndị na -ejikọ waya na ọdụ ụgbọ ala - Ime nke a
site na nchịkwa na 20-09-09
Rness Connectors And Terminals - Ime Nhọrọ nke Kwesịrị Ekwesị eriri eriri bụ ihe nwere ọtụtụ wired eletriki yiri ya nke na -enyefe akara ma ọ bụ ike; a na -ejikọ teepu eletriki, eriri, eriri, ma ọ bụ ihe ndị yiri ya ọnụ. Mana, eriri waya ndị a abaghị uru ọ bụla ma ọ bụrụ na ...
N'IHI gịnị ka enweghị ike iji kpaa akpaaka
site na nchịkwa na 20-08-19
Mgbe anyị chere maka nrụpụta ihe na narị afọ nke 21, anyị na -ese foto igwe na -akpaghị aka na -amịpụta ngwa ngwa ngwa ngwa. Yabụ kedu ihe kpatara usoro nrụpụta eriri waya dị mgbagwoju anya enweghị ike bụrụkwa akpaaka nke ọma? Iji zaa ajụjụ a, anyị chọrọ nkọwa miri emi ...
Kere njikota Design
site na nchịkwa na 20-08-18
A na -ahazi eriri waya iji mee ka nrụpụta ngwa ngwa dị ukwuu, a haziri ya dabere na geometric na eletriki chọrọ nke akụrụngwa a ga -etinye n'ime ya.
N'ime otu afọ, a na -emepụta nde kwuru ụgbọ ala n'ụwa niile.
site na nchịkwa na 20-08-17
N'ime otu afọ, a na -emepụta ọtụtụ nde ụgbọ ala n'ụwa niile. Ọ bụ ezie na ụdị, akụkụ na atụmatụ nwere ike ịdị iche iche, ụgbọ ala ọ bụla chọrọ eriri waya. Ihe njikota ahụ na-ejikọ wiwi n'ime ụgbọ ala ahụ, na-enye ike ihe niile site na njikwa ike na ọkụ ọkụ ruo na mgbada ...
site na nchịkwa na 20-06-28
OZI Nkà na ụzụ OLINK ---- GỊNỊ BỤ ỌGWỤGWỌ ỌGWỤGWỤ? Ihe nkedo wired bụ mgbakọ nwere ọtụtụ wires kwụsịrị ma ọ bụ ejikọ ọnụ. Mgbakọ ndị a na -akwado nrụnye n'oge mmepụta ụgbọala. Ha niile ...
Ọzụzụ eriri na eriri
Nke a bụ mmeghe maka eriri kacha mma na eriri aka na klaasị ọgbakọ. Nke a bụ aka na klaasị ndị na -ewu eriri igwe nwere ike tinye na ihe nlele nyocha 620 ma ọ bụ nwee ike zụọ ndị ọrụ ọhụrụ na usoro kwesịrị ekwesị maka ịcha, yipụ ihe, yipụ ihe na mgbakọ ...
igbe ozi monica@olinktek.com
Ndị na -emepụta wires
Wiring njikota Supplier